About Us - Dongguan Xianglin caaga Product Co., Ltd.
Tayada waa arrin ku saabsan oo shirkadda ka dhigaa ma compromises.With 100,000-isweydaarsiga heer saabsanaa isdaahirinta, iyo dhirta ka badan 15,000 mitir oo laba jibbaaran, wax soo saarka wax soo saarka gaaro 500,000 nooc ah maalin kasta. weelka kartoo la Gurdanka kulul, daabacaadda shaashadda, pating olol waa offerable.
Xianglin joogto ah ku dadaaleysaa in ay ka badan macaamiisheena 'laga filayo labada tayada alaabooyinka iyo adeegga macaamiisha. Xianglin loo tababaray wakiilada adeegga macaamiisha la macaamiisheena shaqeeyaan gacanta-in-gacanta si loo ogaado wax soo saarka ugu fiican ee baahida ay.
khubaro Our farsamo leeyihiin waayo-aragnimo gacan-ku-ballaaran leh waxyaabaha aan sameeyo oo waa iska diyaar in ay ka jawaabaan su'aalaha oo dhan. At Xianglin, waxaan si joogto ah dabagal macaamiisheena si loo hubiyo in ku qanacsan tahay wax soo saarka boqolkiiba 100.
xigsiin Easy - aad doorato
Our line alaabta oo dhan waa la heli karaa for amro 24 saacadood maalintii.
Waxaan ku faraxsanahay inaan soo xigto! : Fadlan email u soo diri amy_wen@dgxianglin.com
: Waayo maraakiibta qiyaasaha, fadlan sidoo kale email u soo diri amy_wen@dgxianglin.com
Aqbalayno 30% deposit by T / T, dheelitirka 70% ka hor dhalmada.
FOB Shenzhen, ama Guangzhou.
Amarada markab doonaa 'prepay iyo dar' dhibic FOB maraakiibta. Haddii ay jirto side doorbidayso, fadlan ogow this ee 'comment' meesha amarka. Claims for khasaaro ama waxyeello ah ee gaadiidka waa in isla markiiba dhigay (30 maalmood gudahood) iyo xusay on biilka ah shixnadda.
Haddii shayga u muuqda in uu dhaawac visable by UPS, nala soo xiriir 48 saacadood gudahood bixinta.
Waayo, shixnadaha xamuulka, yari iyo waxyeelo kasta oo dhan waa in la qoran Bill ka Of shixnadda ama Freight Bill. Waa in aad go'aan ka in kasta oo waxyaabaha waxyeelo ama ka maqan, WAA INAAD ogow shayga, farqi ah, iyo xaaladda ka hor intaadan saxiixin.
Saxiixaaga on xamuulka side bixinta ee Bill Of shixnadda (Bol) ka dhigan aqbalo baayacmushtari sida uu yahay iyo si wanaagsan. Haddii aadan baaraan ka hor saxiixa aad tahay, wax kasta wax ku ool ah, dhaafayso xaq u leeyihiin inay ururiyaan sheegashadaada dhaawac ah xitaa haddii dhaawaca ah la helay (oo loo yaqaan dhaawac qarinaayay).
All items waxaa lagu damaanad saaruhu ka dhanka ah failure keliya sababa sancada ama qalabka haleysan. Haddii aan si kale lagu sheegay qoraal, iibiyaha dhigaysa damaanad jirin in weelasha, xidhitaanka, iyo sheeyada kale muujinayaa ama lagu tilmaamay, taasina waa taam ujeeddo gaar ah.
Haddii ay dhacdo in soo laabto, fadlan soo wac for a clamers rasmi ah.
All items daabacaadda waa non-celin. No reeban.